Shake Call Accept v.1.0 (ဖုန်းလာပြီဆိုရင် လှုပ်ပြီးကိုင်လို့ရတယ်) ~ mgkhainghtoo
23:30 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Shake Call Accept ဆိုရင်လူတိုင်းနားလည်ပါပြီထင်တယ်။ ဖုန်းလေး လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ incoming call တွေကို နောက်လက်မအားလည်း ရပါတယ်။ အေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဖုန်းပြောလို့ပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက် ကျသွားလိမ့်မယ်။ Google Play မှာ rating 4.1 ရထားတဲ့ apk ပါ။ October62013 ထုတ်ပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/a9cWT မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ သဘောကျသွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Shaking Call Accept
this is most advanced ,useful & smartest app in Android market, Shaking call receive app is one of the best & must have app in android market.
3. Answer call by bringing device near ear
4. Adjust sensitivity for shakingHow to attend call using shake call :
NOTE : The app is still under development , so there are chances for poor performance on some devices . Please report the problems and we will fix it within 24 hours .
NOTE : The app shows advertisements to get fund for further development